Fiarovana ny fampiasam-bola : Noraisin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ny avy ao amin’ny GEM
Tafiditra anaty andraikitry ny Ministeran’ny Fitsarana ny fiarovana ny fampiasam-bola sy ny famatsiam-bola eto Madagasikara. Izay indrindra no nahatonga teto Faravohitra androany Talata 09 Novambra 2021, ireo solontenan’ny Vondron’ny Mpandraharaha eto Madagasikara (GEM). Nihaino ny hetahetan’izy ireo ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fiaraha-miasa.
Voalohany amin’ireo ny ady amin’ny kolikoly eo anivon’ny Fitsarana. Maika noho izany ny famerenana ny fahatokisan’ireo mpandraharaha Malagasy ny Fitsarana satria iankinan’ny fampandrosoana ny firenena ny fandraharahana ka mila arovana.
Toy izao ny fanazavana misesy entin’ny Filohan’ny GEM, Atoa RAJAONA Thierry, sy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
Fanajana ny zon’olombelona : Fiofanana 4 andro ho an’ny Mpandraharahan’ny Fonja miisa 30
Tompon’andraikitra isan-tsokajiny miisa 30 mianadahy eo anivon’ny Fandraharahana ny Fonja avy eto amin’ny Faritra afovoany, no miofana mandritra ny 4 andro etsy amin’ny Carlton Anosy. Atrikasa izay nisokatra androany Talata 09 Novambra 2021, miompana amin’ny fanajana ny zon’olombelona any am-ponja. Tompon’antoka amin’ny fikarakarana ny avy ao amin’ny « Direction de l’Humanisation de la Détention et de la Préparation à la Réinsertion Sociale » na DHDPRS eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.
Mpanohana kosa ny « Programme des Nations Unies pour le Développement » (PNUD), ny « Haut Commissariat des Droits de l’Homme », ary mpamatsy vola ny « Fonds pour la Consolidation de la Paix » (PBF) amin’ny alalan’ny Tetikasa « Capitalisation des Acquis de la Paix à Madagascar » (CAPMADA). Hitohy any Toamasina sy Fianarantsoa ny atrikasa fiofanana, amin’ny herinandro ambony.
Toy izao ny fanazavana entin’ny DHDPRS, Atoa RAKOTOMALALA Aina Tantely.